धार्मिक कारण थाहा पाउनुस्– साउनमा किन लगाउने हरियो ? « Khabarhub
काठमाडौं– साउन महिना शुरु भएसँगै युवती र महिलाहरु हरियो तथा पहेँलो चुरा र सारीमा सजिएका देखिन्छन् ।
आज भोलि हरियो सारी, चुरा पोते, पहेलो सारी चुरा पोते फेसन जस्तै बनेको छ । फेसनको रुपमा नै आएपनि यसको धार्मिक र वास्तुशास्त्रीय विशेषता र महत्व पनि रहेको छ ।
साउन महिनामा विशेषगरि भगवान शिवको पूजा अर्चना हुन्छ र भक्तालुहरुले शिव भगवानलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्छन् ।
भगवानलाई खुसी पार्न किन हरियो नै लागनुपर्ने भन्ने प्रश्न जन्मिन सक्छ । यसका केही कारणहरु पाइन्छन् ।
साउन महिना प्राकृतिक रुपमा हरियालीको महिना पनि हो । चारैतिर हरियाली देखिन्छ जसका कारण भगवानका भक्तहरुले पनि आफूलाई त्यही रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
साउनमा किन लगाउने हरियो ?
ज्योतिषीका अनुसार हरियो रंग सौभाग्यको रंग हो । साउन महिनाको प्राकृतिक हरियालीसँग आफूलाई एकाकार गर्ने महिना पनि हो ।
गवान शिवलाई जल अर्पण गरेर प्रकृतिसँग नजिक हुने अवसर भएका कारण यो महिनामा हरियो रंगको विशेष महत्व रहेको हुन्छ । हरियो रंग र प्रकृतिसँगको एकाकारले भाग्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने मान्यता रहेको छ ।
शास्त्रमा प्रकृतिलाई ईश्वरको रुपमा लिइएको छ । जसकारणले गर्दा प्रकृतिको पूजा अर्चना गर्ने गरिएको छ । साउन महिनामा प्रकृतिको पूजा अर्चना गर्दा समृद्धिका साथ आयुआरोग्य वृद्धिहुने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
श्रावणमा हरियो लगाउँदा शिव भगवान खुसी हुने धार्मिक विश्वास छ । भगवान शंकर प्रकृतिसँग विशेष रुपमा जोडिएका छन् ।
उच्च रक्तचापको समस्याका लागि पनि हरियो राम्रो मानिन्छ । विवाहित जोडिको सुमधुर सम्बन्धमा पनि शयनकक्षको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा हरियो रंग लगाएको खण्डमा दाम्पत्य जीवन सुखी हुने कुरा वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार, हरियो रंग बुध ग्रहको प्रतीक पनि हो । हरियो रंग लगाउँदा बुध बलियो भएर सन्तान सुख प्राप्ति हुन्छ । अनि यस रंगले बुद्धि र समृद्धि प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
महिलाका लागि रातो रंग खुशी र सौभाग्यको प्रतीक हो । यस्तै हरियो रंग चाहिँ परिवार र जीवनमा खुशी ल्याउन निकै प्रभावकारी हुन्छ । बुध ग्रहको असर व्यक्तिको करीयर र व्यवसायमा सीधै पर्छ । यस रंगलाई शरीरमा धारण गर्दा मनुष्य आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफल हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार २ : ३६ बजे
लमजुङ – हिमाली जिल्ला मनाङमा पहिलो पटक आँखा शिविर सञ्चालन
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २ घरवारीटोलका २० वर्षीय सुन्दर हरिजनको
विमानस्थल निर्माणमा अदालतले रोक लगाउनू गलत : शंकर पोखरेल
काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निजगढ
काठमाडौंलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउने वालेनको प्रतिवद्धता
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर वालेन्द्र शाहले काठमाडौंलाई विश्वकै उत्कृष्ट